Islamic perspective; Astrology vs Astronomy ( Myanmar Language) – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on May 29, 2009 October 12, 2009 by kyawkyawoo	Posted in တွေးမိတွေးရာTagged allah, Astrology Astronmy and Islam, တွေးမိတွေးရာ, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, islam, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, religion, science
တဲ့်အာကာသဟင်းလင်းပြင်ထဲ မှမဟာတွင်းနက်ကြီး များအ
အာကာသဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာ Black Hole လို့ခေါ်တဲ့တွင်းနက်ကြီးတွေ
ရှိကြောင်းသိတာ နှစ်အတန်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ကြယ် များသက်တမ်းကုန်တဲ့အခါ
ဒြပ်ထု ဟာပထမပိုင်းပွလာ ပြီးနောက်တဖြည်းဖြည်း ပြန်ကျုံ့ပါတယ်။ ဒီလိုပြန်ကျုံ့
လေလေသူ့ရဲ့ ဒြပ်ဆွဲအားဟာလဲကြီးလေလေ နဲ့နောက်ဆုံး ကြယ်သေရဲ့ ဒြပ်ထုဟာ
လူသားမျက်စေ့နဲ့ မမြင်နိုင်အောင် သေးငယ်သွားတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ဆွဲအားဟာ
ဒီအလင်းရောင်မဲ့ တွင်းနက်ကြီးတွေကို အာကာသပညာရှင် တွေက X ray ရောင်ခြည်
သုံး အာကာသကြည့်တယ်လီစကုပ် မှန်ပြောင်းကြီးများနဲ့လေ့လာရာမှာ မနေ့က
Super massive Black Hole သို့မဟုတ် မဟာတွင်းနက်ကြီးများဟာ
ဂယ်လက်ဆီလို့ခေါ်တဲ့ ကြယ်အစု ကြီးတိုင်းရဲ့ အလယ်ခေါင်မှာနေရာယူထားတယ်
မဟာတွင်းနက်ကြီးတခုဟာ အချိန် တနာရီပြည့်တိုင်းကမ္ဘာဂြိုယ်အရွယ်ရှိ ဂြိုယ်နှစ်ခုကို
ဝါးမြိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေမိသားစု ရဲ့ အကြီးဆုံး
ဂြိုယတခုဖြစ်တဲ့ နေ ရဲ့ဒြပ်ထုပေါင်းသန်းသုံး ထောင်မှသန်းငါးထောင် ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ ညီပါသတဲ့။
ဗေဒင်ပညာရဲ့အခြေခံဟာ ဂြိုယ်များရဲ့အနေအထားနဲ့လူသားရဲ့ မွေးရက်
ဥပမာပေးရရင်လရဲ့ဆွဲ ငင်အားကြောင့်ဒီရေအတက်အကျ ဖြစ်ရသလို
Islam ဘာသာကAstrology လို့ခေါ်တဲ့ ကြယ်နှင့်ဂြိုယ်တွေကလူတွေရဲ့ဘဝနဲ့ရှေ့ရေးကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့
အကယ်၍ Allah မှတပါးအခြားတစုံတခုက(ကြယ်၊ဂြိုယ်) သင့်ရဲ့ဘဝရှေ့ရေးကိုအဆုံး
အဖြတ်ပြုနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်မိ တာနဲ့(Shirk Akbar)လို့ခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့တွဲဖက်
ကိုးကွယ်ရာ ရောက်တဲ့ အလွန်ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကြယ်တွေ ဂြိုယ်တွေမှာလူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့
ပါဝါတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ အယူဝါဒကိုလက်ခံသူတွေ ဒီလိုမမြင်နိုင်သော်လည်း
အလွန်အင်အားကြီးတဲ့ မဟာတွင်းနက်ကြီးတွေကို ကြားဖူးကြမယ်မထင်ပါ။
ကြီးပြီးမမြင်ရတဲ့ Black hole တွေ နဲ့အခြားမမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေ
ဒါဆိုရင် Islam ဘာသာဝင်မဟုတ်သူတောင်မှဒီပညာကိုလက်ခံဖို့
Islam ဘာသာက Astronomy ဆိုတဲ့ကြယ်နဲ့ဂြိုယ်တွေရဲ့ရွေ့ရှားမှူတည်နေရာကို
တွက်ချက်ရန်မှအစ ခရီးလမ်းညွန်မှူပေးရန် အသုံးချခံဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။
Allah ရဲ့ကြီးကြယ်မြင့်မြတ်မှူကို ညွန်ပြတဲ့သက်သေ လက္ခဏာများသာ ဖြစ်တယ်။
Allah အရှင်မြတ်ရဲ့ပေးထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့လူသားတွေ အာကာသဟင်းလင်းပြင်ကို
ခြေဆန့်ခဲ့တာ လပေါ်ကိုလူရောက်ခဲ့တာ အနှစ်လေးဆယ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။
နောင်အနာဂတ်မှာလူသားတွေဒီကြယ်တွေအခြားဂြိုယ်တွေကို Allah အရှင်မြတ်ခွင့်
ဒီPost ကိုရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကမြန်မာမွတ်စလင် ညီနောင်များထဲမှအချို့
သောသူများမသိနားမလည်မှူ ကြောင့်ဒီပညာများကိုယုံကြည်မိလျှင် အလွန်အပြစ်ကြီး
ကြောင်း အမြန်ဆုံး Allah အရှင်မြတ်ရဲ့လမ်းကိုပြန်လှည့်ရန်အသိပေးလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအထဲမှာ ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာပါတဲ့ Horoscope ဖတ်ကြည့်တာကအစ
လက္ခဏာ ဗေဒင်မေးခြင်းနဲ့ ဂဏန်းဗေဒင်တွက်တာတွေ အားလုံးပါပါတယ်။
စံနဲ့ဖန်ဆင်းထားသလိုအခြားဖန်ဆင်းခံများကိုလဲ Allah ရဲ့အမိန့်
ထူးခြားတာကလူသားကို Allah အရှင်မြတ်က စမ်းသပ်ရန်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထား
အားလုံး မိမိရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကို အဖိုးတန်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာအကောင်း
5 thoughts on “Islamic perspective; Astrology vs Astronomy ( Myanmar Language)”
Long time no see. How are you? This is very nice post. Today, so many Muslim are depending to the Astrology. We need to understand the Quran more and more. Please allow me to use it in my blog and IYS. May Allah (S.W.T) blees you.
Submitted on 2009/06/08 at 6:48am
လာလည်သွားပါတယ်။ ကောင်းမြတ်သောအကျိုးကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ချီးမြှင့်ပေးသနားတော်မူပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်လူငယ်များကူညီမှုအသင်းပီနန်ရဲ့ ဘလောက်လေးကိုလဲ လာလည်ပါအုံး။ မိတ်ဆွေရဲ့ ဘလောက်လိပ်စာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလောက်မှာ လင့်ခ်ချိတ်ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘလောက်လိပ်စာကတော့ http://mmyhapenang.blogspot.com ဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားစွာနဲ့
I have heard about black holes before. I just wanna know one thing more. Does Quran mention about Black Holes?
I have alraedy reposted “The Black Holes: Might Oath” for furthur reading.
Thank you for your comment. I am little busy. I will try to be in IYS soon.